Bloggers Of Bloggers: နာမည်လေး သုံးလုံး
Posted by ဆရာကြီး (ခေတ္တ ကျွန်းပေါ် ) Labels: ရီတာ
ကျနော်တို့ ရဲ့ ဇတ်လိုက်ကျော်မကြီးရဲ့  ဘလော့ဂ်မှာလေ ဒီနာမည် သုံးလုံးပဲတွေ့ရတယ်။ သူမကြည့်ရတာ ဒါမှ မပါဘူးဆိုရင် စာရေးလို့မဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ အင်း အခုမှ သူမဘလော့ဂ်တဲ့ရည်၇ွယ်ချက်ကို သိတော့တယ်။ တကယ်တော့ သူမတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူမက ဟိုဘလော့ဂ်သူ တမူထူးတာထက်ပိုထူးတယ်။ ဏှာမို ထူးတယ်။ ကျနော်ပြောတာ မယုံဘူးဆိုရင် သူမကိုမေးကြည့်။ ဘယ်ကဗျာက ဘယ်နားမှာ။ ဘယ်ပိုစ့်က ဘယ်လို သူမ အဲ့ဒီလောက်ထိ အကုန်သိတာ။ အင်းပေါ့လေ သူတောင်းစားမှာတောင် နတ်သမီးကို အိမ်မက်မက်ခွင့်ရှိတာပဲ။ သူမက သူတောင်းစားမှ မဟုတ်တာ။ သူမ ကို ကျနော်တို့ရဲ့ ညီနောင်တွေက ခွေးပစ်တဲ့ ဒုတ်လောက်တောင်မရှိဘူးတဲ့။ အဲဒါကို ဆရာကြီးက မင်းကွာ ခွေးပစ်တဲ့ ဒုတ်နဲ့တော့ မနှိုင်းပါနဲ့ တဲ့ ဒုတ် သိက္ခာကြပါတယ်တဲ့။ ကောင်းရော။
ဘာတဲ့ လုပ်ကြံတာထက်ေ၇ှ့ကနေ သေနတ်နဲ့သာ ပစ်ချင်တယ် ဟုတ်လား။ ဟုတ်မှပဲ လုပ်ပါ နပုမ ရာ။ သေနတ်က လူကို ပြန်ပစ်နေပါအုန်းမယ်။ တကယ်တော့ သူမ ကိုင်မယ့် သေနတ်က မထုတ်ရသေးဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒီလိုရေးထားတာ။
ပြောမယ့်ပြောတော့ မှတ်လောက်သားလောက် နာမည်တပ် ပြောပါဗျာ။ သွယ်ဝိုက်မနေပါနဲ့။
ဆုံးမတဲ့ စကားလုံးပဲ မထိရောက်လို့လား၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်က လုံးဝ အရှက်မဲ့နေတာလားတော့ မသိဘူး။ အရင် ပိုစ့်တွေထဲမှာ ပါတဲ့လူတွေကလည်း မမှတ်ကြဘူး။ ခင်ဦးမေ တို့၊ အဖြူရောင်နတ်သမီးတို့၊ တီချမ်း နဲ့ ညီနေမင်းတို့ ကိုလည်း မှတ်လောက်သားလောက် ဖြစ်စေမယ့် စကားတွေနဲ့ ထပ်ဆုံးမ ပေးပါအုံး။
နောက်ပြီး ခုနောက်ပိုင်း လူပြောများနေတဲ့ ငယ်နိုင် http://nge-naing.blogspot.com/ အတွက်လည်း ပိုစ့်တစ်ခုလောက် တောင်းဆိုပါတယ်။ စီဘောက်စ်တိုင်းမှာတွေ့နေရလို့။ လူတစ်ကာနဲ့ ရန်ဖြစ်နေကျမို့ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီထက် ထိရောက်တဲ့ နည်းတွေ သုံးစေချင်ပါတယ်၊ ပုံမှန် ပိုစ့်တင်စေချင်ပါတယ်။
post တခုကို တခု လည်ပင်းရှည်အောင် စောင့်ရပါတယ် :( နေ့တိုင်းကို လာကြည့်ပါတယ်..
http://nge-naing.blogspot.com/ သူ့အကြောင်းရေးပါဗျာ. လူတကာနဲ့ရန်ဖြစ်နေတာပါ ရန်ညှိုးမရှိပါ..ဒါပေမဲ့ သူ့တင်ထားတဲ့ cbox ကအစ ဟိုလူ့ရွဲ့ ဒီလူစောင်းနဲ့ တကယ့်စိတ်ပျက်စရာ မိန်းမကြီးပါ ပြီးတော့ http://mabaydar88.blogspot.com/ ရှရှားကစစ်သားအကြောင်းကစ.. နာမည်တူပြဿနာလယ်.. ခုနောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူ ကျော်ရဲအောင်ချစ်ချစ် ဆိုပြီး သူငယ်ပြန်နေတာ တွေနဲ့ စိတ်ပျက်စရာ ဘာဗဟုသုတ မှ မရတဲ့အပြင် တလွဲတွေ ရေးတဲ့ အဲ့ဘွားတော် ကြီး ၂ ယောက်ကို ရေးပါဗျာ.. ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့ blog ကိုပါ ပိတ်ပစ်ချင်တာ အာရုံနောက်လွန်းလို့ cbox တကာ လှည့်အော်နေတာ.. ရေးစမ်းပါဗျာ.. တကယ့်ကိုစောင့်နေပါတယ် :(
ကျုပ် လူ့မိုက်ရိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဒါပေမယ့် အဲဒီကောင်မတော့ အပြင်မှာ တွေ့ရင် သောက်ခွက်ကြီးပဲ ရိုက်ပစ်မယ်ဗျာ။
အလုံး မဆန့်တာတွေ ပြောပြီး အာပြဲနေတဲ့ ကောင်မ ။ သူ့ကိုယ်သူ ဘာကောင်မ ထင်နေလဲ မသိဘူး။ ဒီအချိုးမျိုးနဲ့ဆို လင်ရရင် ညတိုင်း နပန်ကျင်း ခံရမှာတော့ သေချာတယ်
အောက်တန်းအကျဆုံး၊ အဆင့်မရှိဆုံး၊ လူမဆန်ဆုံး၊ လူလိုနားမလည်ဆုံး၊ လူလိုစကားမပြော၊ မရေးတတ်ဆုံး၊ လူ့ အရေခြုံထားသော လူ့ တိရိတ္ဆန် အပီသဆုံး၊ နှမသားချင်း လူလိုစာနာစိတ်မရှိဆုံး ဘလော်ဂါ နဲ့ကွန်မန့် ရေးသူ အပေါင်းအပါများ အကြောင်းကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီလိုလူမျိုးတွေ တကယ်ရှိပါလားဆိုတာ လက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ရှင်တို့ ဟောင်နေပေမယ့် ဟိုက ခွေးလှေးခုန်လို့ဖုန်တောင်မထပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာကောင်တွေလည်းဆိုတာ မှန်ပြန်ကြည့်ပြီးမှ သူများကို မကောင်းပြောပါ။ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်လူတိုင်းမှာ ရှိပေမယ့် လူတွေက လူတွေကပဲ လူလိုဝေဖန်တတ်ပါလားဆိုတာ ဒီလိုလူ့ တိရိတ္ဆန် ဘလော့ကြောင့် သိခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ လူ့ အောက်နိမ့်တာ တိရိတ္ဆန်တွေ ပဲရှိလို့ တိရိတ္ဆန် တွေနဲ့ နှိုင်းလိုက်ရပေမယ့် တိရိတ္ဆန် တွေကို တကယ်ပဲအားနာမိတယ်။
အောက်တန်းအကျဆုံး၊ အဆင့်မရှိဆုံး၊ လူမဆန်ဆုံး၊ လူလိုနားမလည်ဆုံး၊ လူလိုစကားမပြော၊ မရေးတတ်ဆုံး၊ လူ့ အရေခြုံထားသော လူ့ တိရိတ္ဆန် အပီသဆုံး၊ နှမသားချင်း လူလိုစာနာစိတ်မရှိဆုံး ဘလော်ဂါ နဲ့ကွန်မန့် ရေးသူ အပေါင်းအပါများ အကြောင်းကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီလိုလူမျိုးတွေ တကယ်ရှိပါလားဆိုတာ လက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ရှင်တို့ ဟောင်နေပေမယ့် ဟိုက ခွေးလှေးခုန်လို့ဖုန်တောင်မထပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာကောင်တွေလည်းဆိုတာ မှန်ပြန်ကြည့်ပြီးမှ သူများကို မကောင်းပြောပါ။ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်လူတိုင်းမှာ ရှိပေမယ့် လူတွေကို လူတွေကသာပဲ လူလိုဝေဖန်တတ်ပါလားဆိုတာ ဒီလိုလူ့ တိရိတ္ဆန် ဘလော့ကြောင့် သိခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ လူ့ အောက်နိမ့်တာ တိရိတ္ဆန်တွေ ပဲရှိလို့ တိရိတ္ဆန် တွေနဲ့ နှိုင်းလိုက်ရပေမယ့် တိရိတ္ဆန် တွေကို တကယ်ပဲအားနာမိတယ်။
No! That might be her, RITA. HeHe
yes might be >> fucking bitch
ဟီဟိ.... ကြည့်ပြီးပြီလား? ရုပ်ဆိုးမရဲ့ ပုံကို! သားစိတ်မယားစိတ်တောင်ကုန်သွားတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်ပြရင်တောင် မလာဘူး .. သွားမကြည့်နဲ့ ... သွေးဆုံးနေတဲ့ရုပ် .. ;)
စောက်ဆင့် မရှိတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေကြတာ မြန်မာဆိုတာမှာ ဒီလိုကောင်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိကြရင် သိက္ခာကျ သေးတယ်။ ရေးတဲ့ကောင်ကလည်း အဆင့်အတန်း ဂုဏ်သိက္ခာ မရှိ ကွန်းမန်းတွေ စီဘောက်တွေမှာ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ မြှောက်ပင့် ရေးခိုင်းနေတာ အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ ခွေးလောက်တောင် အဆင့်မရှိဘူး။ခွေးက အိမ်လုံခြုံ အောင်ဟောင်ပေးတယ် ။ဒီလို ကောင်တွေက မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ အုပ်ကြားမြက်ပေါက် ကောင်တွေပဲ ။ဘာမှသုံးမရဘူး။ မင်းတို့ စောက်ရှက်ရှိရင် သေဖို့ကောင်းတယ် ဘယ်သူအတွက် ဘာအကျိုး ရှိလည်း။ မင်းတို့ လုပ်ကြံပြောနေတာတွေက မင်းတို့ ဒီလိုလူတွေ အဆင့် ခြေဖျားတောင်မမှီတာ လူတိုင်းသိတယ်ကွ။ မြှောက်ပေးနေတဲ့ ကောင်တွေက မနာလို ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်တွေပဲ ။သူတို့ လို တောင် နည်းနည်း လေးရေးပြပေးပါဦးကွာနော်။ ဒီလို ကောင်တွေ မြန်မာမှာ ရှိနေတာ ကိုက သိက္ခာကျစရာပဲ။မင်းတို့ ရေးထားတာတွေ မြှောက်ပင့်ပြောတာတွေက နိုင်ငံခြားသား ကမြန်မာလို မဖတ်တက်လို့သာပဲ ဖတ်တက်ရင် တော့ ....။ဘယ်နိုင်ငံမှာ မှ ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့ မနာလို တဲ့ စိတ်မရှိဘူး။ မင်းတို့ လုပ်ရပ်က မသေခင်က ပုတ်စော်နံမည့်ကောင်တွေပဲ။ သူများကို စောက်တင်းပြောတော့မယ်ဆို မင်းအမေ မင်းညီမ မင်းတို့ အမတွေကို ပြန်မြင်ယောင်။မင်းတို့ စောက်တင်းတုတ်တော့မယ်ဆို အရင်အဲဒီလူတွေကို မင်းတို့ ဆွေမျိုးလို သဘော အရင်ထားကြည့်ပြီးမှ တုတ်ကြ။
စောက်ဆင့်မရှိ ဘာမှအတုယူစရာပညာရစရာမရှိ ။လာဖတ်တဲ့ကောင်ကလည်း ဒီလိုကောင်ပဲလာဖတ်တယ်။ ဘယ်သူမှ ထက် မလာဘူး။တခါပဲ လာမယ် နောက်ဘယ်သူမှမင်းတို့ ဆီလာမှာ မဟုတ်ဘူး။အေး ငါလည်း နောက်ဘယ်တော့ မှမလာဘူး။အကုသိုလ်ဖြစ်လို့...
မင်းတို့ ဝဋ်ဆိုတာ မမေ့ နဲ့ မင်းတို့ သားသမီး လက်ထက်မှ မင်းတို့ ပြုတဲ့ကံ ခံရမယ် မှတ်ပါ။
လမ်းသွားရင် သတိထား အကုသိုလ်တွေ များနေလို့ ကားတိုက် သင်္ဘောမှောက် ရေနစ် သူများသတ်လို့ သေတက်တယ်ကွ။ဝဋ် ....ဝဋ် ဝဋ် ....။ ကိုယ်ပြုသမျှကံ ကိုယ်ထံ ပြန်လာလိမ့် မယ်ဆိုတာ ကိုကျော်သူ စကားပဲ။မမေ့မဲ့
စောက်ဆင့် မရှိတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေကြတာ မြန်မာဆိုတာမှာ ဒီလိုကောင်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိကြရင် သိက္ခာကျ သေးတယ်။ ရေးတဲ့ကောင်ကလည်း အဆင့်အတန်း ဂုဏ်သိက္ခာ မရှိ ကွန်းမန်းတွေ စီဘောက်တွေမှာ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ မြောက်ပင့် ရေးခိုင်းနေတာ အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ ခွေးလောက်တောင် အဆင့်မရှိဘူး။ခွေးက အိမ်လုံခြုံ အောင်ဟောင်ပေးတယ် ။ဒီလို ကောင်တွေက မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ အုပ်ကြားမြက်ပေါက် ကောင်တွေပဲ ။ဘာမှသုံးမရဘူး။ မင်းတို့ စောက်ရှက်ရှိရင် သေဖို့ကောင်းတယ် ဘယ်သူအတွက် ဘာအကျိုး ရှိလည်း။ မင်းတို့ လုပ်ကျန်ပြောနေတာတွေက မင်းတို့ ဒီလိုလူတွေ အဆင့် ခြေဖျားတောင်မမှီတာ လူတိုင်းသိတယ်ကွ။ မြောက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေက မနာလို ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်တွေပဲ ။သူတို့ လို တောင် နည်းနည်း လေးရေးပြပေးပါဦးကွာနော်။ ဒီလို ကောင်တွေ မြန်မာမှာ ရှိနေတာ ကိုက သိက္ခာကျစရာပဲ။မင်းတို့ ရေးထားတာတွေ မြောက်ပင့်ပြောတာတွေက နိုင်ငံခြားသား က မဖတ်တက်လို့သာပဲ ဖတ်တက်ရင် တော့ ....။ဘယ်နိုင်ငံမှာ မှ ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့ မနာလို တဲ့ စိတ်မရှိဘူး။ မင်းတို့ လုပ်ရပ်က မသေခင်က ပုတ်စော်နံမည့်ကောင်တွေပဲ။ သူများကို စောက်တင်းပြောတော့မယ်ဆို မင်းအမေ မင်းညီမ မင်းတို့ အမတွေကို ပြန်မြင်ယောင်။မင်းတို့ စောက်တင်းတုတ်တော့မယ်ဆို အရင်အဲဒီလူတွေကို မင်းတို့ ဆွေမျိုးလို အရင်ထားကြည့်ပြီးမှ တုတ်ကြ။
လမ်းသွားရင် သတိထား အကုသိုလ်တွေ များနေလို့ ကားတိုက် သင်္ဘောမှောက် ရေနစ် သူများသတ်လို့ သေတက်တယ်ကွ။ဝဋ် ....ဝဋ် ဝဋ် ....။ ကိုယ်ပြုသမျှကံ ကိုယ်ထံ ပြန်လာလိမ့် မယ်ဆိုတာ ကိုကျော်သူ စကားပဲ။မမေ့နဲ့
လမ်းသွားရင် သတိထား အကုသိုလ်တွေ များနေလို့ ကားတိုက် သင်္ဘောမှောက် ရေနစ် သူများသတ်လို့ သေတက်တယ်ကွ။ဝဋ် ....ဝဋ် ဝဋ် ....။ ကိုယ်ပြုသမျှကံ ကိုယ်ထံ ပြန်လာလိမ့် မယ်ဆိုတာ ကိုကျော်သူ စကားပဲ။မမေ့နဲ့ငရဲမင်း ပါပါ
ဟဲ...ဟဲ၊ အနာပေါ်ဒုတ်ကျ... အတော်နာသွားသလား? ဂျော်လီဆွေမကိုယ်တိုင်လား အနံ့ရှူတဂိုဏ်းထဲပဲကလား ? မနိုင်တော့ဟိုဟာနဲ့နှိုင်း ဒီဟာနဲ့နှိုင်း! နင်တို့ဂိုဏ်းစောက်ကျင့်ကဒီလိုပဲ၊
စောက်ကြီးစောက်ကျယ် တွေပြောတုံးကပြောပြီး အဖဲ့ခံရမှမနာနဲ့။ စောက်ဖြစ်ရှိရင် ဂန္တဝင် စာတပုဒ် လောက်ရေးတင်လေ.... သနားတယ် ဟား...ဟား...ဟား
ဟုတ်ပါ့ မှန်တာပြောတော့ ထိသွားတယ်ထင်ပါတယ် .
ပြောချင်တာပြောပါစေ .. ငါတို့ကလည်းပြောချင်တာတွေ ပြောနေတာကိုး အဆင့်အတန်းဆိုတာ ဘာနဲ့တိုင်းပါ့လိမ့် .. အခုသူပြောသွားပုံက တော်တော် အဆင့်ရှိတယ် ဟဲဟဲ
သြော် ဒီဟာမကြီးကို ကျိတ်ပိုးနေတဲ့သူတွေက ရှိသေးတယ်။ တော်တော်နာနေပုံရတယ်.. အဆင့်အတန်းတွေ ထပ်ခါ ထပ်ခါသုံးသွားပြီး ကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်ပြန်ဖော်သလိုဖြစ်နေတာတောင် သတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတယ် ဟိဟိ
ဟိုအပေါ်က ငရဲမင်းက အမှန်တွေ ပြောလို့ အတော် အထိနာ သွားတာပဲ ဘယ်လို အဆင့်အတန်းတွေ နဲ့ ရေးပြီး ဘယ်သူမှ မသုံးတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး သူပဲ သုံးသွားတယ်.. အော်..သနားစရာ LoL
နင်လိုကောင်မက ဦးချစ်မောင်အကြောင်းပြောတာနာတယ်။ နင့်အဖေမပြောနဲ့ နင့်အဖိုးတောင်သူ့လိုစောက်ဖြစ်ရှိခဲ့လို့လား? ရာရာစစ ကိုယ့်နေရာနဲ့ ကိုနေစမ်းပါ။ မနေ့တနေ့ကမှမွေးပြီး နင့်စောက်ခွက်နဲ့ လူတွင်ကျယ်သိက်မလုပ်ခြင်နဲ့။သူများစာတွေကူးတင်ပြီး ဟိုသူမကောင်းဘူး.... ဒီသူမကောင်းဘူးနဲ့ ။ စောက်ဖြစ်ရှိရင် ဂန္တဝင် စာတပုဒ် လောက်ရေးတင်လေ....
လမ်းကြုံတုန်းလေး ဝင်ဆဲသွားလိုက်အုံးမယ် .....
နှမလိုး ...ခွေးသူတောင်စား .. ဒီ blog ရေးတဲ့ကောင် .... မိုးဖင် မိုးလင်းသွားမယ် ။
ငါ့နာမည် သံချောင်းတဲ့ဟေ့..... တစ်ချောင်းထဲ ရှိတယ် ။ ၂ ချောင်းရှိရင် မီးဖုတ်ပြီး မင်းဖင်ထဲထည့်လိုက်မယ် ။ ဟား..ဟား.ဟားဟား
တော်တော် နာသွားတယ် မဟုတ်လား ... မင်းမျက်နှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ ငါသိတယ် ... မျက်နှာကြီးလည်းနီရဲနေတာပဲ ... ဟား...ဟား...ဟား